Amphitheater ciriiri ah, awood xaddidan, sawiro badan ama shuruudaha gelitaanka jaamacadda, welwelka waalidiinta haysta shahaadooyinka dugsiga sare ee doonaya inay u gudbaan anshax aan la garanayn oo mararka qaarkood la quudhsado, nacayb madax-adayg, u diyaargarowga daraasadaha jimicsiga jirka. Aragtiyo aad u badan oo tilmaamaya ololaha gelitaanka jaamacadda-baccalaureate sanad walba, taasoo ka dhigaysa STAPS mid kacsan ama edbin dhib leh. Marka aad la kulanto indho-indhayntan, MOOC waxay kugu martiqaadaysaa inaad ogaato xaqiiqada STAPS, kala duwanaanshaha waxyaabaha ka kooban, fursadaha xirfadeed ee ay u horseedaan, runta ku saabsan guusha ama guuldarada qaybtan, habka wanaajinta fursadahan guusha STAPS.
Ujeedada koorsadan waa in ardayda loo ogolaado in ay si wanagsan u fahmaan koorsooyinka STAPS iyo shuruudaha ka hor inta aysan samayn rabitaan iyo doorashooyin waxbarasho dheeraad ah. Waxaa lagu soo bandhigay qaab muuqaalo gaagaaban oo muujinaya marag furka macalimiin, arday ama xirfadlayaal laakiin sidoo kale bixiya sharaxaad shaqo ama su'aalo, koorsadan waxay socon doontaa 5 usbuuc iyadoo qiyaasta ku dhawaad ​​​​soddon daqiiqo todobaadkii.
Hordhac STAPS Diisambar 14, 2021Tranquillus
READ Caafimaadka shaqada: maxaa isbeddelaya laga bilaabo Maarso 31, 2022
horeWax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato tusmada sinnaanta jinsiga
socdaChemistry: u fur albaabada tacliinta sare!